Snn Nepal संक्रमितमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदामात्रै अस्पताल जाने हो ? – Snn Nepal
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस ९कोभिड—१९० संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएसँगै अस्पतालमा बिरामीले हत्तपत्त बेड पाउने अवस्था छैन । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा गम्भीर समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । त्यस्ता बिरामीका लागि आइसियू, भेन्टिलेटर र अक्सिजनसहितको बेड पाउन झन् मुस्किल छ ।
लक्षण अनुसारको औषधि सेवन गरिरहेका र कोरोना लक्षण देखिएका सामान्य अवस्थाका संक्रमित अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड संयोजक एवं छाती रोग विषेशज्ञ डा। सन्तकुमार दास बताउँछन् ।
भाइरसको नयाँ स्ट्रेनले शरीरमा प्रवेश गर्दा पनि रुघाखोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, शरीरका मांसपेशी दुख्ने, छालामा एलर्जी आउने, शिथिलता हुने, गन्ध हराउने, कतिपयमा वाकवाकी, पखाला लाग्ने, मुख सुक्खा हुने, घाँटी खसखसाउने, दुख्ने लक्षण देखिन्छ ।
यी लक्षणहरु निरन्तर देखिएर बेडबाट उठ्नै नसकेपछि अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्न आउँदा धेरैलाई कोभिड संक्रमण भइसकेको पाइएको डा. दास बताउँछन् । त्यसैले कुन अवस्थामा कोरोना संक्रमित बिरामीले डाक्टरसँग सल्लाह लिने वा अस्पताल पुग्ने भनेर थाहा पाउन अत्यन्त जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमितमा लक्षण देखिएको ४र५ दिनभित्र चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । संक्रमित वा शंकास्पद व्यक्तिको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नियमित नाप्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण भएको दुई दिनसम्म मन्द ज्वरो आएमा, लगातार खोकी लागेमा लक्षण देखिएको ४–५ दिनभित्रै चिकित्सकसँग परामर्श लिन जानुपर्छ ।
संक्रमणको लक्षण देखिएको ६र७ दिन जोखिमपूर्ण समय भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । संक्रमितमा लक्षण देखिएको ६र७ दिनमा निमोनिया भइ अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमित तथा आशंका गरिएका व्यक्तिले अक्सिजनको मात्रा अक्सिमिटरले नियमित नाप्नुपर्छ । अक्सिजनको मात्रा ९३ भन्दा कम भए तत्काल चिकित्सकसँग परामर्श लिइहाल्नुपर्ने डा। पुन बताउँछन् ।
यता, डा। दास होम आइसोलेशनमा बस्ने लक्षणसहितका बिरामीले अक्सिजनको लेभल कम हुँदामात्रै अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ भन्ने गलत बुझाइ रहेको बताउँछन् । ‘संक्रमितलाई अन्य दीर्घरोगले ग्रस्त पारेको छ र अक्सिजनको लेभल ठिक छ भने पनि बिरामीको अवस्था हेरेर भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।